GIMP ichave iri nani pane Photoshop ine UI yakavandudzwa, sekureva kwaSnowden | Linux Vakapindwa muropa
Zvagara zvichitaurwa kuti kuenzanisa kunosemesa, uye ichokwadi chaizvo kana zvasvika pasoftware. Chimwe chirongwa chinogona kuve chakashata kupfuura chimwe uye chive sarudzo yedu nekuti tinonzwa kugadzikana nacho, asi chokwadi chekuti hatizive mamwe mabasa kana kuti isu tinofarira imwe sarudzo kupfuura imwe hachiratidze kuti ndicho chakanakisa. Mune graphic dhizaini, kana kuti zvirinani mukugadzirisa mifananidzo, chirevo chinonzi Adobe Photoshop, uye kune mumwe munhu anofunga izvozvo GIMP inogona kunge iri pamusoro.
Enda kumberi izvi zvarinotaura Edward Snowden, uye ini ndawana maonero ako nekuverenga chinyorwa by ISIMBI TV Iye aimbove mushandi weCIA anofara nazvo Blender, yakavhurwa sosi 3D modelling software, uye iwe unoshamisika pane izvo zvinogona kuwanikwa neakavhurika sosi software. Akazviita paTwitter, kwaakawedzera tweet maanotaura nezveGIMP achivimbisa kuti inogona kupfuura Adobe.
Ko GIMP yaizowana yakawanda kudaro neshanduko yeshanduko?
PS @GIMP_Official, Ndiri kutarisira chaizvo kuti iUI iwedzere kugadzirisa. Imi varume munogona kunge muchidya masikati eAdobe.
- Edward Snowden (@Snowden) July 18, 2021
Nguva dzese dzandinoshandisa @Blender, ndinotya izvo zvemahara uye zvakavhurika sosi software inogona kuwana. Ini pachokwadi handizive kuti vanozviita sei. Icho chivako. PS @GIMP_Official, ini ndinotarisira chaizvo kuhombe UI kugadzirisa. Imi varume munogona kunge muchidya masikati eAdobe.
Ini pachangu, ini ndinofunga kuti yekare GIMP, ine matatu windows, yaida shanduko yekukurumidzira, asi iyo shanduko yatotora nzvimbo. Kune rimwe divi, ini ndoziva kuti inokwanisa kuita yakawanda yekugadzirisa mifananidzo, asi ini ndinorangarira kuti pandakashandisa PhotoshopZvese zvinhu zvaiita sezviri nyore kwandiri, uye kugadzira animated GIF, ine yayo nguva yenguva, chimwe chinhu chandakakwanisa kuita muAdobe software uye, kunyangwe ini ndisisichichide, ndinofunga chakanyanya kuomarara muGIMP.
Chero zvazvingaitika, panguva ino GIMP haina kuronga chero chinongedzo chinoshanduka. Kana akafunga kuita kudaro, iwe unofunga kuti Snowden ndizvo here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Edward Snowden anofunga kuti GIMP yaizokunda Photoshop kana ikavandudza chimiro
Ini handifunge kuti inopfuura Photoshop, asi asi neicho chinongedzo chinoshanduka kune icho chinenge chakateedzerwa, chinogona kumiririra kukwikwidza chaiko, nekuti dambudziko re "kuoma" muGIMP nderekuti harina kugadzirirwa nyaradzo yevanoshandisa Nezve zvishandiso zvinoshandiswa zvakanyanya uye zvirinyore kutariswa, zvitaera uye mhedzisiro, GIMP inotarisa zvakanyanya pakuchengeta zvinodiwa nemusika kwete padivi remushandisi. Ndiwo maonero angu.
Izvo zvinoitika kwandiri. Ndanga ndichishandisa PS kwemakore, asi ndafunga kupa GIMP kuyedza uye inoshanda zvikuru. Kunyangwe ini ndisingazive kana nekuda kwetsika yePS kana chaizvo kushomeka kweGIMP UI, zvese zvinodhura zvakanyanya.
Ndinovimba vanoramba vachivandudza. Ndinovimba tevera nzira yeBlender.
Ziva kuti GIMP inogona kumisikidzwa sehwindo rimwe chete?
hongu mumahwindo sarudzo
Ini ndinofunga chinongedzo chidiki, kutaura zvazviri chakafanana ne Photoshop. Dambudziko raigara richiuya kubva kudivi rehunyanzvi uko kwaive nezvikanganiso.
Tony Martin Lopez akadaro
Kwete, izvo hazviitike, kunze kwekunge Adobe yaita chikanganiso chakakura kwazvo, iwo ndiwo muyero nerutsigiro rwehunyanzvi hwehunyanzvi uye hwaro hwakakura kwazvo hwevashandisi vasingade kudzidza kushandisa chimwe chinhu uye votenga kana kuitora. Kana Adobe akaita chaiyo uye isingakundiki dziviriro vanhu vazhinji vaizoedza kushandisa Gimpi nepo Photoshop icharamba iri Mambo.
Pindura Toni Martin Lopez
Ruben Diaz akadaro
Kana ivo vakaita GIMP ive inonakidza uye pamusoro peyese inogadziriswa interface, kana kana vakagadzira Photoshop yeLinux, wozoonekana Windows uye gamuchira Linux uye ginp
Pindura Rubén Díaz
Ubuntu 20.10 inomira kugamuchira rutsigiro neChina. Gadziridza izvozvi